Iipasipoti zokugonya ze-COVID-19 zokuhamba ngaphakathi kwe-EU ziqala eYurophu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » Iipasipoti zokugonya ze-COVID-19 zokuhamba ngaphakathi kwe-EU ziqala eYurophu
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseDenmark zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseGrisi zokuPhula • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ngamana 29, 2021
Inkulumbuso yase-Greek u-Kyriakos Mitsotakis ubize iipasipoti zokugonya "ngumgaqo okhawulezayo ukulungiselela ukuhamba" eYurophu kunye nokunceda "ukubuyisela inkululeko yokuhamba," njengoko i-European Union inyanzela onke amazwe angamalungu ukuba amkele le nkqubo.
I-EU icinezele onke amazwe angama-27 angamalungu ukuba amkele ipasipoti ebanzi nge-1 kaJulayi
Iipasipoti ziya kusebenza nakwizizwe ezingezizo ze-EU iIceland, iLiechtenstein, iNorway neSwitzerland
Amagosa aseburhulumenteni ase-US athi nawo ayawujonga lo mbono
IGrisi neDenmark bakhuphe iipasile ezintsha ngolwesiHlanu, baba lilizwe lokuqala le-European Union ukumilisela iipasipoti zokugonya ze-COVID-19 zokuhamba ngaphakathi kwe-EU.
Inkulumbuso yase-Greek u-Kyriakos Mitsotakis ubize iipasipoti zokugonya "ngumgaqo okhawulezayo wokuququzelela uhambo" eYurophu kunye nokunceda "ukubuyisela inkululeko yokuhamba," njengoko i-European Union inyanzela onke amazwe angamalungu ukuba amkele le nkqubo.
The udibano lwaseyurophu icinezele onke amazwe angama-27 angamalungu ayo ukuba amkele ipasipoti ebanzi nge-1 kaJulayi, evuma kwisicwangciso ngokomgaqo kwiveki ephelileyo phambi kwexesha lezokhenketho lasehlotyeni. Ukutyhala kuza emva kokuba ibhlogi ifuna ukunciphisa izithintelo zokuhamba ezibekiweyo kubhubhani, icebisa ukuba amalungu avumele iindwendwe zangaphandle ukuba zigonyiwe ngokupheleleyo.
Iipasipoti ziya kusebenza nakwamanye amazwe angengawo e-EU i-Iceland, iLiechtenstein, iNorway, neSwitzerland, ngokweKhomishini yaseYurophu.
Ngelixa ezinye i-EU zisithi, kubandakanya iDenmark, bebesele bezenzile izatifikethi zabo zangaphakathi zokugonya, iipaspoti ezintsha zinokusetyenziselwa uhambo lokuwela umda, ngokuhambelana nesindululo sika-Matshi yiKhomishini yaseYurophu.
Iipaspoti zamaGrike nezaseDenmark zilawulwa ngeapp ye-smartphone ebonisa imeko yomntu wokugonya kunye nexesha lokugqibela kuvavanywa i-coronavirus. Zombini zisebenzisa ikhowudi ye-QR e-scannable ukuhambisa ngokukhawuleza ulwazi, nangona iinguqulelo zamaphepha ziya kwenziwa zifumaneke.
Ngelixa iPalamente yaseYurophu kusafuneka ivume ngokusesikweni inkqubo yepaspoti, amazwe aliqela sele eqhubele phambili. Ukongeza eGrisi naseDenmark, i-Ireland ikwabhengeza izicwangciso ngolwesiHlanu ukwamkela ukupasa kwe-COVID yamazwe aphesheya ngoJulayi 19, ngelixa i-National Health Service yase-UK kutshanje ihlaziye usetyenziso lwayo lokundwendwela.
Amagosa aseburhulumenteni ase-US athi nawo ayawujonga lo mbono. Njengokuba abaphumeleleyo befumana ukubambeka kulo lonke elaseYurophu, amagosa ase-US athe nawo ajonge umbono wohambo lwangaphandle, kunye nomphathi weSebe lezoKhuseleko lwaseKhaya (i-DHS) u-Alejandro Mayorkas uxelele i-ABC ngolwe-Sihlanu ukuba abaphathi be-Biden "bajonge kakhulu . ”
Isithethi se-DHS kamva sacacisa, nangona kunjalo, ukuba ayizukubakho "igunya lomanyano" lalo naluphi na uhlobo lokugonya lokugonya, esongeza ukuba urhulumente uza kunceda amaMelika kuphela ukuhlangabezana neemfuno zokungena kwamanye amazwe.
“Yiloo nto [iMayorkas] ibibhekisa kuyo - iqinisekisa ukuba bonke abahambi baseMelika bazokwazi ukuhlangabezana ngokulula nazo naziphi na iimfuno ezilindelekileyo zokungena kwilizwe langaphandle,” batsho.